जुलुस | samakalinsahitya.com
‘आज त दुईचार जनाको टाउकै फोर्नुपर्छ, यार !’ –एउटाले सूर्य चुरोट सल्काएर ओठमा चेप्दै सानसँग भन्यो ।
‘साला भाते के टाउको फोर्ने कुरा गर्छ । कुनै बैङ्कसैङ्क या फाइनान्सको लकर फोर्नुपर्छ भन न ।’ –अर्कोले अझ फौज्दारी सम्वाद स्वाट्ट त्यसरी नै झिक्यो जसरी तराईतिर दसैँमा काट्न ठिक्क पारेको खसीलाई कानमा पानी हालेर ‘मान्यो’ भनेपछि काट्ने मानिसले स्वाट्ट दापबाट कट्टी झिक्छ ।
आजको जुलुसचाहिँ प्रतिपक्षको हो । त्यसो त जुलुस भनेपछि प्रतिपक्षको मात्र दमदार हुन्छ । सत्तापक्षको जुलुसमा त राजधानी बाहिरबाट पैसादिएर मानिसहरू गाडीका गाडी ओसार्नुपर्छ । अहिले भने प्रतिपक्षले पनि त्यही सिको गर्न थालेका छन् । आन्दोलनमा पैसा, हतियार र गुन्डाहरूको लगानी निकै बढ्न लागेको छ । सायद् यो लगानी पनि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि मद्दतनै पुग्दो हो । हो, आज पनि त्यस्तै भएको छ ।
पुलिस पनि के कम ‘रण्डीका छोरा, मा.....ने’ भन्दै आन्दोलनकारीतर्फ हान्ने राँगाझैँ एकोहोरिएर जाइलाग्छन् ।
‘एई जंकी छोड्दे ब्याउने कोरली रै’छे !’ –एउटाले दया देखाउँछ ।
‘तैँले त ब्याउने बनाएको होला नि हैन ?’ –अर्कोले भद्दा गाली झिक्छ ।
‘मा....’ भन्न खोजेको कुरा पूरा नगरी अर्को फेरि बौलाउँछ – ‘साला भालेलाई यही दिन चल्ला कोरल्ने गरी के मिसिनु परेको नि ।’
महिला रुन्छे । कराउँछे । कन्न थाल्छे –अँ...अँ...अँ ! भीड पनि बच्चाझैँ नक्कल गरेर कन्न थाल्छ सामूहिकरूपमा –अँअँअँअँ !
उतातिर महिलाले भने पेटीमै सालनालसहितको बच्चो पाउँछे । भाडाका आन्दोलनकारीहरू सबै उतै साहोरिन्छन् मानौं गाउँमा बाख्रो ब्याउँदा काम नपाएका भुराभुरीहरूले बाख्राका पाठापाठीहरूलाई हेरेझैँ घाँटी तन्काएर हेर्छन् । लोग्नेले केकेकेके गाली गर्छ तर स्वास्नीचाहिँ चोरी औंलाले लोग्नेलाई नबोल्न इसारा गर्छे । स्वास्नीचाहिँको अगाडिपछाडि सबै लछेप्रै भएर रगत लागेको छ । लोग्नेचाहिँ के गर्ने के नगर्ने किंकर्तव्यविमूढ देखिन्छ । महिला ‘ऐया ऐया’ भन्दै रुँदै छे । अनेक बिन्तीभाउ गर्न थाल्छ –लोग्ने । कसैले उसको अरण्यरोदन सुन्दैनन् ।
जुलुस अगाडि बढ्छ । लोग्नेले नवजात शिशुलाई आफ्नो सर्टमा बेरेर वीर अस्पतालतिर लैजान्छ । स्वास्नीचाहिँ लैनो बाछोको पछिपछि लागेको गाईझैँ उसैको पछि लाग्छे ।
जुलुस त्यो दृश्य हेरेर एकाएक अट्टहास हाँस्न थाल्छ । हा...हा...हा !!! हि.....हा.....हा.....हा..... !!!